သီဟနိုင် on 2014-04-05 11:31
Kristoffer Von Hassel အမည်ရှိတဲ့ ၅နှစ်သားလေးဟာ သူ့အဖေရဲ့ Xbox Live အကောင့်ထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ကုတ်ရိုက်ရမယ့် မျက်နှာပြင်ပေါ်လာတဲ့အခါ Kristoffer က space ကို အကြိမ်အနည်းငယ်ပုတ်လိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
ခရစ်စမတ်ပြီးတဲ့အချိန်လောက်မှ ကလေးအဖေဖြစ်သူ Robert Daviesဟာ ကလေး ၀င်သုံးခွင့်မရတဲ့ ဂိမ်းတွေကို သူ့သားဆော့နေတာ သတိပြုမိခဲ့တယ်လို့ KGTV-TV ကို Robert ကပြောခဲ့ပါတယ်။
Robert Davies ဟာ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီ လျှို့ဝှက်ကုတ်ကို သူ့သား ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စရပ်ကို Robertက Microsoft ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ Microsoft က bug ကို ပြင်ဆင်ရေးသားခဲ့ပြီး မကြာမီဆိုသလို Microsoft ရဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ Robert Kristofferကို “လုံခြုံရေး သုတေသီ” အဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော် အောင်မြင်ကျော်ကြားတော့မှာပေါ့။ !” လို့ Robert Kristoffer က တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာပေးစေဖို့ Microsoft ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကို ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာတော့ ပြန်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
Robert Kristofferရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတစ်နှစ်သားတုန်းက ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့ home ခလုတ်ကို ဖိပြီး lock လုပ်ထားတာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျပ်သိန်း(၁၂၀၀၀)တန်ဘိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲအချိန် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမှတ်(၂၄)မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့စု(လားရှိုး)မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်းအရ သက်သေများနှင့်အတူ မူဆယ်-လားရှိုးပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ဘုံမွန်စိုက်ခင်းအနီးတွင် မူဆယ်မှလားရှိုးဘက်သို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်ပင်လယ်ရွာနေ စိုးမြင့်နောင်(၄၀)နှစ်မောင်းနှင်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ မမန်ခမ်းဆီ (၅၂)နှစ်လိုက်ပါလာသည့် ၈A/xxxx ဗင်အဖြူရောင်ယာဉ်အား ရပ်တန့်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထိုသို့ရှာဖွေရာ ယာဉ်မောင်းနောက်ခန်းရှိထိုင်ခုံအောက် အံဝှက်အတွင်းမှ WY စာတန်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြား(၆)သိန်း၊ တန်ဘိုးငွေကျပ်သိန်း(၁၂၀၀၀)အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိ ခဲ့သောကြောင့် စိုးမြင့်နောင်နှင့်မမန်ခမ်းဆီတို့ ၂ ဦးအား လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်း မယ(ပ)၁၉/၂၀၁၄၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၁၅/၁၉(က)/၂၀(က)/၂၁ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည် အကြီးဆုံး ရော့ခ်တီးဝိုင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Iron Cross တီးဝိုင်းက ရန်ကုန် သင်္ကြန်မှာပဲ ရှိမှာဖြစ် ပြီး လူငယ်ရော့ခ် ပရိသတ် အသည်းစွဲ S.I.R Rock Group ကတော့ မန္တလေး သင်္ကြန် High Class မဏ္ဍပ်မှာ ဖြတ်သန်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန် သင်္ကြန်မျှော်စင်ကျွန်း ထဲက Grand Royal မဏ္ဍပ် မှာတော့ လင်းလင်း၊ ဆိုတေး၊ အလင်းရောင်၊ ဇွဲပြည့်၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ လိမ္မော်သီး စတဲ့ တေး သံရှင်တွေ ရှိနေကြမှာဖြစ်ပြီး ဟစ်ဟော့ပ် တေးသံရှင် အများစုက ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ်က မဏ္ဍပ် အသီးသီးမှာ ရှိကြမယ်လို့ သိရပြီး တေးသံရှင် ရန်ရန်ချန်းကတော့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာ မဏ္ဍပ်ဆောက်ဖြစ်မယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ အနုပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် စီစဉ်တည် ဆောက်တဲ့ မဏ္ဍပ်များလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အရင်နှစ် ထက်လည်း မဏ္ဍပ် အရေအတွက် ပို များပြားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သင်္ကြန်မှာ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေမယ့် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက “ဒီနှစ်သင်္ကြန်က SKY NET မဏ္ဍပ်မှာရှိမှာပါ။ Grand Royal မဏ္ဍပ်မှာလည်း သီချင်းတွေ သွားဖျော်ဖြေဖို့ ရှိပါ တယ်။ မြန်မာ လူမျိုးတွေက သင်္ကြန်မှာဆိုရင် တအားပျော်ကြတယ်။ ဝိုင်းစုလည်း သင်္ကြန်ရောက်ရင် ပျော်ပါတယ်။ သင်္ကြန်မှာတော့ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး တစ်ခါမှ မနေဖူး ဘူး။”လို့ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကိုပြောပြပါတယ်။
ဧပြီ ၅ ရက် ၂၀၁၄
“တာချီလိတ်မြို့ရောက် RCSS/ SSA ကစဝ်စိုင်းလူး က ဝ တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းကို အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းပေးပို့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီ။ ဝ တပ်ဖွဲ့မှန်း ကျနော်တို့မသိဘူး၊ ရွှေလာတူးနေတာဘယ်သူလဲပေါ့၊ စုံစမ်းဖို့အသွားလမ်းမှာထိပ်တိုက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်တော့တာပဲ” - ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် ဌာနချုပ် အရာရှိ တဦးကပြောသည်။
သီးခြားအတည်ပြုချက်မရသေးသည့် သတင်းအရ မြန်မာအစိုးရတပ် နှင့် ၀ ပြည်သွေးစည်းတပ်မတော် တို့ ပူးပေါင်းကာ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တပ်စခန်းအား ဖေဖေါ်ဝါရီလ နှောင်းပိုင်းကလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးသည်ဟု ဆိုသည်။
ယမန်နှစ်ကလည်း နယ်မြေကျူးကျော်မှုကြောင့်ဟုဆိုကာ RCSS/SSA ၏ လူ အင်အား ၃၀ ခန့်ကို ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်က ဖမ်းဆီးကာ ပန်ဆန်း ဌာနချုပ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ဖူးသည် ဟု ဆိုသည်။
မီးရထားလမ်းတွင် အိပ်နေသဖြင့် ရထားကြိတ်ခံခဲ့ရပြီး အရေးယူခံရ
၄.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၁၅၀ အချိန်တွင် မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည်
ရထားလမ်းအတိုင်း ရန်ကုန်မှ ပုဂံသို့ မောင်းနှင်လာသည့် အမှတ်(၆၁)
အဆန် အမြန်ရထားသည် ဖူးကြီးဘူတာနှင့် ၀ါးနက်ချောင်းဘူတာကြား မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၅/၃)နှင့် (၃၅/၄)ကြားအရောက် သံလမ်းပေါ်တွင်
ခြေလက်များတင်၍ အိပ်နေသော အောင်သက်၊ (၂၇)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလှ၊ ဖူးကြီးကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်နေသူကိုကြိတ်မိခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ကြိတ်မိသဖြင့် ရထားမှာ မိနစ်(၄၀)ခန့် ရပ်တန့်ထားခဲ့ရပြီး
အောင်သက်တွင် ၀ဲလက်မောင်းနှင့် ၀ဲခြေထောက်ပြတ်ဒဏ်ရာများ
ရရှိခဲ့သဖြင့် တိုက်ကြီးဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသခဲ့ရပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် မီးရထားလမ်းတွင်အိပ်နေခဲ့သူ
အောင်သက်အား အရေးယူပေးရန် ဖူးကြီးဘူတာရုံပိုင် ဦးမျိုးလှိုင်မှ တိုင်တန်းချက်အရ မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်း (ပ)၁၈၈/၂၀၁၄၊ မီးရထားအက်
ဥပဒေပုဒ်မ-၁၂၆(င) ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာ မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဂျပန်-အာဆီယံ ယူ ၁၄ ချစ်ကြည်ရေးပွဲစဉ် တတိယနေ့ ဧပြီ ၅ရက်နေ့မှာ မြန်မာ ယူ ၁၄ အသင်းက မနက်ပိုင်းမှာ မလေးရှားအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းမှာ ဂျပန်ယူ ၁၄ နဲ့ ချစ်ကြည်ရေးပွဲ ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ကစားခဲ့ ပါတယ်။
ပထမပိုင်းမှာ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နည်းစနစ်နဲ့ ကြံခိုင်ရေးပြည့်စုံတဲ့ ဂျပန်အသင်းကို ဂိုးသွင်းခွင့်ပေးလိုက်ရပြီး မြန်မာအသင်းက အချိတ်အဆက်အားနည်းလာပြီး ၃ ဂိုး အသွင်းခံလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာအသင်းက ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့မယ့် ဂိုးသွင်းလွဲချော်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာအသင်းက ပွဲပြီးခါနီး ၁ ဂိုး ပြန်သွင်းနိုင်ပေးမယ့် ဒိုင်လူကြီး အဆုံးအဖြတ်နဲ့ မရခဲ့ပါဘူး။
မြန်မာလူငယ်တွေကတော့ အခုလို လာရောက်ကစားခွင့်ရလို့ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဂျပန်ရဲ့ လေ့ကျင်အားထုတ်မှုတွေ အနီးကပ်တွေ့ မြင်ရလို့ အကျိုးအများကြီးရတယ်လို့
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အိတ်ဇောသံဆူညံသည့်ဆိုင်ကယ်များ အသိမ်းခံရမည်
မန္တလေးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ရေပက်ခံထွက်နေသည့်ဆိုင်ကယ်များအားတွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ − ညီညီဇော်)
မန္တလေး− မန္တလေးမြို့သင်္ကြန်ပွဲ တော်တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် များ အိတ်ဇောစက်သံဆူညံစွာ မောင်းနှင်ပါက သင်္ကြန်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ဆိုင်ကယ်သိမ်း ဆည်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သ တင်းရရှိသည်။
ဆိုင်ကယ်အိတ်ဇောစက် သံဆူညံသည့်မော်တော်ဆိုင် ကယ်များအား ပွဲတော်ရက်မတိုင် မီ ခုနစ်ရက်ကြိုတင်ကာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအရေးယူ သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်ပွဲ တော်ရက်မတိုင်မီ အရေးယူသော ဆိုင်ကယ်များအား တရားစွဲဆို ပြီး အိတ်ဇောလဲလှယ်စေကာ ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်ကာလ အတွင်းအရေးယူသောဆိုင်ကယ် များကိုမူ ပွဲတော်ပြီးဆုံးပြီးနောက် တရားစွဲဆိုပြီးမှသာ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးယာဉ်ထိန်း ဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး ရဲမှူးသင်းကိုကိုကပြောကြားသည်။ ‘‘တစ်နှစ်က ဆို အိတ်ဇောဖြုတ်မောင်းတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေဖမ်းတာ အစီးခုနစ် ရာကျော်တယ်။ ရုံးဝင်းထဲကိုထား လို့မရတော့အောင်များတာ’’ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အိတ်ဇောစက်သံဆူညံခြင်း အပြင် လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လမ်း ပြောင်းပြန်မောင်းနှင်ခြင်းများကို လည်း အရေးယူသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ရဲမှူးကပြောကြားသည်။
‘‘အိတ်ဇောသံတွေဆူတာ တအားအမြင်ကတ်တယ်။ တစ် ချက်တစ်ချက် လန့်တောင်သွား တယ်။ သင်္ကြန်မရောက်ခင်က တည်းကဆူနေကြပြီ’’ဟု မန္တလေး မြို့မှ အသက် (၂၀)အရွယ် မမေ သူကပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့ သင်္ကြန်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ယာဉ်မောင်းသူ၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူအများစု မှာ အရက်သေစာသောက်စား ကာ စည်းကမ်းမဲ့မောင်းနှင်မှုများ ရှိနေပြီး သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ယာဉ်ကြောရှင်းလင်းရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်နေရသည့်အတွက် အရေးယူနိုင်မှုအားနည်းနေသည် ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိတစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း မန္တလေးမြို့တွင် စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ်အစီးရေ ၇၅ စီးကို တရား စွဲဆိုအရေးယူခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားမှ ဒုံးကျည်များ အသစ်ထပ်မံ ပစ်ခတ်ခဲ့လျှင် ပစ်ချရန် ဂျပန်မှ စစ်တပ်အား အမိန့်ပေးထား
ပြုံးယမ်းမှ ရိုဒေါင် တာလတ်ပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကို ပင်လယ်တွင်းသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် မြောက်ကိုရီးယားမှ ပစ်ခတ်သည့် မည်သည့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကိုမဆို ပစ်ချသွားရန် ဂျပန်ပင်လယ် အတွင်းရှိ ဖျက်သဘောင်္ကို အမိန့်ပေးထားကြောင်း အစိုးရမှ စနေနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းအမိန့်ကို ကြာသပတေးနေ့တွင် ဂျပန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး အစ်ဆူနိုရီ အိုနိုဒဲရာမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်များအတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တိုကျိုနှင့် ပြုံးယမ်းကြား စကားပြောဆိုမှုကို မထိခိုက်စေရန်အတွက် လူထုကြား ထုတ်ပြန်မှု မရှိခဲ့ပေ။
“ ဧပြီလ ၃ ရက်ကနေ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ဘယ်လို ပဲ့ထိန်းဒုံး ပစ်ခတ်မှုမျိုးမဆိုအတွက် ပြင်ဆင်ထားဖို့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးက အမိန့် ထုတ်ထားပါတယ် ” ဟု သတင်းရင်းမြစ်မှ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပစ်ခတ်လာနိုင်သည့် ဒုံးကျည်များအတွက် နောက်ဆုံး ကာကွယ်မှု ဖြစ်သည့် ပက်ထရီယော့ ဒုံးကျည် ဘက်ထရီများကိုမူ အိုနိုဒဲရာမှ တပ်ဆင်ထားမှု မရှိဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအပတ်အတွင်း မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်တို့၏ ဘေဂျင်းတွင် ဆွေးနွေးမှုမှာ တိုးတက်မှု မရှိခဲ့သော်လည်း ထပ်မံ ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီမှု ရရှိထားခဲ့သည်။
ရိုဒေါင် ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုမှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားနှင့် တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်တို့မှ ခေါင်းဆောင်များ ဟိဂ်မြို့တွင် ဆွေးနွေးနေစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တာတိုပစ် ဒုံးကျည်များကိုလည်း စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
၎င်းပစ်ခတ်မှုမှာ မြောက်ကိုရီးယားမှ အလေးမထား ဂရုမစိုက်သည့်ပုံ ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဒုံးကျည်မှာ ကီလိုမီတာ ၆၅၀ (မိုင်ပေါင်း ၄၀၀) ခန့်ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ပျံသန်းနိုင်မည် မျှော်မှန်းထားသည့် ကီလိုမီတာ ၁၃၀၀ ထက် လျော့နည်းခဲ့သည်။
ဂျပန်၏ ကာကွယ်ရေး ဖျက်သဘောင်္များမှာ အဆင့်မြင့် ရေဒါစံနစ်များ တပ်ဆင်ထား၍ ပစ်မှတ် အများအပြားကို ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ပဲ့ထိန်းဒုံးများကို လေထုထဲတွင်ပင် ပစ်ချနိုင်သော ဒုံးကျည်များ ပါဝင်သည်။
ရောင်ပြန်ငါးလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ Cardinalfish (ကာဒီနယ်) ငါးများဟာ Atlantic သမုဒ္ဒရာ၊ အိန္ဒိယနဲ့ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ တို့မှာ ရှင်သန် ပေါက်ဖွား ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူခြားချက် တစ်ခုက ကာဒီနယ် ငါးမ များဟာ ငါးထီးများရဲ့ ပါးစပ်မှာ အဥ ဥခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားတာက ယင်း ငါးထီးများဟာလည်း ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ငါး သားပေါက် ငယ်များကို ပြုစုစောင့်ရှောက် ပါတယ်။ ပြန်မစား တတ် ပါဘူး။ သူတို့ ပါးစပ် ထဲမှာ ထည့်ပေးထားခြင်း ဖြင့် အခြားသော ပင်လယ် သားကောင် များရဲ့ ရန်လိုမှု၊ တိုက်ခိုက် စားသုံးမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင် မှာ မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာဒီနယ် ငါးက သိပ်မကြီး ပါဘူး။ သုံးလက်မ ခွဲ လောက်အထိပဲ ကြီးပါတယ်။ ငါးက အရောင်ပြန်နေပြီး အများအားဖြင့် ရေငံမှာပဲ ပေါက်ဖွား ရှင်သန်တဲ့ ငါးများ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးသားပေါက် များကို ပါးစပ်ထဲ ထည့်မွေး ထားပေးတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အလေ့အထ ကြောင့် ကာဒီနယ် ငါးများဟာ လူသိများ နာမည်ကြီးခဲ့ ပါတယ်။
လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မြို့မဈေးအတွင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်စဉ်မှ ဒဏ်ရာရရှိသူ သက်ပိုင်ဦး၏ ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းများဖော်ပြခြင်း
အမိုးအကာကူရှင်ပြုလုပ်သည့် ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၂၇/၂၉/၅၉)ဆိုင်ခန်း(၃)ခုမှ ဦးကိုကိုနိုင်၏သားများဖြစ်သည့် ရန်နိုင်(ခ)ရန်အောင်ကိုကို(ခ)အွစ္စမန်ပါ
(၃)ဦးတို့နှင့် ဆိုင်ခန်းအမှတ် (၁/၂၈)မှ “ချစ်မိတ်ဆွေ”အမည်ရှိ နာရီနှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှ သက်ပိုင်ဦး၊ (ဘ)ဦးအောင်ဦးတို့ ခိုက်ရန်
(ခ)အွစ္စမန်ပါ(၃)ဦးကို လှည်းကူးမြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၅၃/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၂၄/၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှဒဏ်ရာရရှိသူ သက်ပိုင်ဦးအား လှည်းကူးမြို့နယ်ဆေးရုံမှတစ်ဆင့် တာမွေမြို့နယ်ရှိ မျက်စိရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပို့အပ်ကုသ
ဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ၀ဲဘက်ပါးရိုး2x 1.5 cm ရှိ ဖူးရောင်ဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ မျက်စိအတွင်းမျက်ဖြူသားပွန်းပဲ့၊ မျက်ကြည်လွှာပွန်းဒဏ်ရာ၊အောက်မျက်ခမ်း
HTC One Vs Galaxy S5 Vs iPhone 5S
ယနေ့ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အကြမ်းခံဆုံးဖုန်းက ဘာများဖြစ်ပါမလဲ ?
Flagship ဖုန်းတွေထဲမှာ ဆိုရင် HTC One M8ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ချက်ထိ သူက ကျန်ခဲ့လို့ပါပဲ။
လုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ ထို ဖုန်း (၃) လုံးကို ရုတ်တရက် မတော်တဆ သဘောမျိုးဖြစ် အမြင့်က ပစ်ချစမ်းသပ်ခဲ့ရာ
လက်ကောက်ဝတ် လွဲခန့် အမြင့်ကဌင်း၊ ဖုန်းပြောနေတဲ့အခြေအနေ နားနားမှ ကပ်နေတဲ့ အမြင့်က ဌင်း၊ ခေါင်းပေါ်ကနေ ဌင်း
ခေါင်းကျော်တဲ့ အမြင့်ကနေဌင်း၊ နေပြီး HTC One M8 ကို အရင်ဆုံးပစ်ချခဲ့ပါတယ်။ ထိုနောက်မှာတော့ Galaxy S5, i Phone 5s တို့ကို အသီးသီး တစ်လှည့်စီ ပစ်ချ စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ရလဒ်အနေနဲ့ အရင်ဆုံး မျက်နှာပြင် ကွဲအက်ကျေမွသွားခဲ့တာကတော့ i Phone 5s ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ i Phone 5sမျက်နှာပြင် ကျေမွကွဲသွားတာကတော့ ဦးခေါင်းခန့် အမြင့်လောက်မှာ ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်လှည့်မှာတော့ Galaxy S5 ဟာ မျက်နှာပြင် ကျေမွထွက်သွားပါတယ်။
HTC ကတော့ ၁၀ပေ အမြင့်လောက်ကမှ ပစ်ချခဲ့သောအခါ ကွဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက HTC One M8 ဟာ အမာဆုံး စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးအဖြစ် ယူဆဖို့ ဖြစ်စေခဲ့တာလား ? ဒါဆိုရင် သင့်ဝယ်မှာလား ? တကယ်တော့ မလိုပါဘူး။ ဒါဟာ စမ်းသပ်မူ သက်သက် တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ လုပ်ရင် ဒီလို ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။. ဒါပေမဲ့ HTC One M8 ကတော့ တစ်ခြား ဖုန်းတွေထက်စာလျှင် လုံးဝ သတ္တုကိုယ်ထည်နဲ့ ပါးလွားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ ရှိနေပါတယ်။
၄.၄.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၉၃၀အချိန်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်ဝင်းမှ ၎င်းသည် နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် သားဖြစ်သူ စိုးမိုးအောင်၊ (၂၄)နှစ်နှင့် တူဖြစ်သူ ချစ်မွှေး၊ (၁၇)နှစ်တို့(၂)ဦးမှာ အပြင်မှနေအိမ်သို့
ပြန်လာရာ သားဖြစ်သူတွင် ၀ဲ/ယာလက်ပြင်နှင့် လည်ဂုတ်တို့၌ ထိုးသွင်း
ဒဏ်ရာများ၊ နောက်စေ့နှင့် ၀ဲမျက်ခုံးပေါက်ပြဲသွေးထွက်ဒဏ်ရာ၊ တူဖြစ်သူ
တွင် ယာလက်ဖျံ၌ ပြတ်ရှဒဏ်ရာများ ရရှိထားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုသို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်အကြောင်းအရင်းအားမေးမြန်းရာ ၎င်းတို့(၂)ဦးသည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှအပြန် (၆)ရပ်ကွက်၊ အောင်သာယာလမ်းပေါ်အရောက် အမည်မသိသူများအားကြည့်မိသည်ကို ၎င်းလူများမှ “ဘာကြည့်တာလဲ”ဟု
ဆိုကာ လက်သီး၊ ဓါးဖြင့် ထိုးခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါလူများအားလိုက်လံစုံစမ်းရာ ခိုင်သန့်ဇင်(စုံစမ်းဆဲ)နှင့် အောင်ပိုင်စိုး
(စုံစမ်းဆဲ)တို့ပါ(၅)ဦးခန့်တို့မှ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကို သိရှိခဲ့ရကြောင်းနှင့် အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းလာခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တိုင်တန်းချက်အရ လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်း(ပ)၄၄၈/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှု
ပုဒ်မ-၃၂၆/၃၂၃/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီး
ရမိရေး စုံစမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။